Yini i-Electronics Circ board board-proofing ezintathu-lacquer yocingo olusindayo？ -News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co, LTD
ISIKHATHI: 2020-08-26 HITS: 34
Esikhathini esedlule, yonke imikhiqizo ka-elekthronikhi kufanele inake ukungavunyelwa kwamanzi. Ngoba uma amanzi engena, umkhiqizo kagesi uzophela. Namuhla, kukhona ushintsho olukhulu lapha. Ukusebenza okungavikeleki kwemikhiqizo ye-elekthronikhi efana nefoni esindayo kuqiniswe kancane. Ngakho-ke siyini isizathu salesi simo sokuthuthuka? Ngakho-ke okukhulunywa ngaye
" Electronics wesifunda ibhodi ezintathu-proofing lacquer"
Njengamanje, ukuthuthuka okusheshayo kwesayensi nobuchwepheshe kuvumele imikhiqizo ehlukahlukene yogesi ukuthi iqhubeke nokuvela emkhakheni wokubona wabantu, futhi inamandla amakhulu. Kodwa-ke, inkinga yokungena kwamanzi/ Isimo sezulu bekulokhu kuhambisana nokuqalwa kwemikhiqizo ye-elekthronikhi njengefoni yezimboni, futhi uma zingavimba amanzi, zizoba zithandwa kakhulu. Enye yezinto engasiza imikhiqizo ye-elekthronikhi ukufeza imisebenzi engangeni manzi yi-Electronics circuit board-proofing lacquer.
Ngakho-ke liyini ngempela ibhodi lesifunda le-Electronics lokuhlola ubufakazi kusho ukuthini?
Ini iyisici nokusungulwa ? Ake sixoxe ndawonye namhlanje.
Electronics wesifunda ibhodi ezintathu-proofing lacquer
liqukethe izinhlaka zokwenziwa, ama-elastomers okwenziwa, amapulasitiki, ama-catalysts, ama-reskyd amile, ama-resin ama-amino, njll. njengezingxenye eziphambili, futhi ahlanganiswa nezengezo, amadiyili, njll. ukufeza izidingo zale ncazelo. Upende ofaka ubufakazi obuthathu obenziwe ngezithako awunazo izinto ezinobuthi. Ngaphandle kokuthi uhlobo lwe-SR nohlobo lwe-XY izinhlobo ezintathu zokupenda, ezinye izinhlobo zama-anti-paint amathathu yizinto ze-fluorescent ezingabhekwa ngaphansi kokukhanya kwe-ultraviolet.
1. Isakhi se-Mono sokuphansi i-viscosity resin, lo mkhiqizo unezici zokusebenza okulula: ukukhishwa kwenqubo yokuxubha ibhulashi; isifutho sokufafaza, ukuhlanganisa inhlanganisela, ukugoqa ikhethini, njll. Ijubane elihlanganisiwe, linamandla amahle okubambelela.
2. Ukuba nemisebenzi emihle ephezulu. kanye nokushisa okushisa okuphansi; ngemuva kokuqiniswa, i-anticreep, ukuzamazama komhlaba, ukungavunyelwa uthuli, ubufakazi bokugqwala, ubufakazi bokufafaza usawoti, ubufakazi bokuthi isikhutha ukumelana ne-corona.
1. Ukukhansela i-element enobuthi kanye nengxenye eyingozi ngenkathi i-resin ihlanganisa futhi ikhetha indawo enhle enendawo enhle. (iyahambisana nezinga laseYurophu neMelika)
2 Umsebenzi ongcono wokufakazelwa okungcono kathathu: ukuba nomsebenzi omuhle kakhulu wokufakazelwa umswakama kanye nosawoti wokuxubha usawoti. Kayikho into kawoyela ekuhlanganiseni, ngakho-ke ubufakazi bokuthi isikhutha esihle buye baba khona
3. Umsebenzi kagesi wokufaka kangcono ugesi: Izici ze-siloxane ze-organic yi-dielectricAproperties, ukumelana kwe-arc, ukumelana kwe-spark kagesi, amandla aphezulu okuqhekeka kukagesi kanye nokusebenza okuhle kobufakazi bamanzi. Ngakho-ke uma kumanzi, ifilimu lokupenda lingamelana nogesi.
4. Ukushisa okumelana nokushintsha: ukumelana nokushisa kwe-organosilocon kufakwe upende okuphakeme ekuhlanganiseni okuvamile. Ukumelana nokushisa okuphezulu kakhulu kwe-iC1stleoneone--605. Imisebenzi emihle yokumelana namakhemikhali: ukumelana okuphezulu kwe-oxidative kuvikela i-thermalstability enhle, umsebenzi wokulwa nokuphehla, ukuqina okuqinile kwe-asidi ehlukile, i-alkali nosawoti.
5. Imisebenzi emihle ye-craft: iqiniswe ekushiseni okujwayelekile noma okuphansi, ifilimu lokupenda linamandla andbright, amandla anamathela aphezulu nokuhlobisa. Kulula ukugoqa, ukugoqa okufafaza, ukugoqa okuhlanganisa nokuxubha ibhulashi kungamukelwa futhi ngokusho kwezikebhe zokupheka ukukhetha ukubukeka kokupenda.
Ngakho-ke, uma kukhulunywa ngezizathu zokuthuthuka kancane kancane kokusebenza okungahambi kwamanzi kwemikhiqizo ye-elekthronikhi, ngakolunye uhlangothi, kungumphumela wokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe bezikhathi. Ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu kanye nezinto ezingamanzi ezingcono zingabona ukungavunyelwa kwamanzi kwemikhiqizo ye-elekthronikhi; ngakolunye uhlangothi, eminye imikhiqizo ye-elekthronikhi Ingahle isetshenziswe endaweni enomswakama, ngakho-ke ukusebenza kwabo kungahambisani namanzi.
UNingbo Joiwo's izingcingo zezimboni ezingangeni manzi zombili zisebenzisa i-lacquer yokuhlola okuthathu ngoba Ibhodi lesifunda le-Electronics, ngakho-ke sinikezela nge-IP66-67 yebanga eliqinile lokuvikela amanzi.
Ucingo lwethu lwezimboni lungasetshenziselwa kakhulu umhubhe, ulwandle, isitshalo samakhemikhali, uwoyela negesi, isitshalo sikasimende, umgwaqo omkhulu, ujantshi, ikheshi, umphakathi ongaphandle njalonjalo.
Ngabe ufuna ezezimboni ngocingo olungena manzi / lwesimo sezulu yanoma iyiphi iphrojekthi?